SAY NO TO PLASTIC – NMDC
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on SAY NO TO PLASTIC
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်​တော်တို့ကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ plastic တွေနေရာတိုင်းမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အသုံးပြုနေကြပါတယ် Plasticတွေဟာအသုံးပြုရလွယ်ပေမဲ့ ကျွန်​တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးနေတာပါ ဒီတော့ ကျွန်​တော်တို့ကျွန်မတို့အားလုံး ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲ
ကျွန်​တော်ကျွန်မတို့ BMSA က ကမ္ဘာကြီးကို တထောင့်တနေရာကနေ ကယ်တင်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ projectလေး တစ်ခုကရောဘာဖြစ်မလဲ အားလုံးပါဝင်ခန့်မှန်းပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
NMDCကျောင်းတော်ကြီး မှာ first year to finalကျောင်းသား​ကျောင်းသူ စုစုပေါင်းဆို 1000 ဝန်းကျင် လောက်ရှိပါတယ် အဲ့ဒီ ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်းတထောင်ဟာ နေ့စဉ် Convenience store​ တွေကနေ ​ရေသန့်ပလက်စတစ်ဘူးကို ​ငွေနှစ်ရာကျပ်နဲ့ဝယ်ပြီး သောက်သုံးနေကြပါတယ်။ လူပေါင်းတထောင်မှာ တစ်ရာလောက်ကသာ ပလက်စတစ်ဘူးတွေ မသုံး​တော့ဘဲနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရေဘူးလေး တွေနဲ့ဆို တစ်နေ့မှာပလက်စတစ်ဘူး တစ်ရာကို လျှော့ချရာရောက်နေပါပြီ။
BMSAရဲ့ 1st productionအနေနဲ့ Say No To Plastic ဆိုတဲ့ campaign ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူ ရေသန့်ဘူးလှလှလေးဘူး တစ်ရာကိုသာ ​ရောင်းချ​ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကို့စိတ်ကြိုက် နာမည်လေးတွေကိုပါ ရေဘူးပေါ်ထိုးလို့ရပြီဆိုတော့ရှယ်ပဲပေါ့ ကဲဒါဆိုရင်တော့ ရေဘူးလှလှလေးတွေကို The whole fresher welcome ပွဲကနေစပြီး BMSA booth က​နေ စာရင်း​ကောက်​ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ကမ္ဘာကြီးကို တထောင့်တနေရာကနေ ကူညီရာရောက်အောင် Campaign လေးမှာပါဝင်ပြီး ရေသန့်ဘူးလေးတွေ အားပေးကြပါဦးနော်။
Business Management Student Association – NMDC
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ လျှောက်ထားမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် သိထားသင့်သည့်အချက်အလက်များ
“Japan Seminar on International Business & Cooperation~ Study in Japan~”
Information for all students;
(Myanmar) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
NMDC Open Campus 2019
(Myanmar) ပထမနှစ် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူမည့်အစီအစဉ်
Introduction to Bachelor of Business Management(BBM)
“Registration For NMDC Photography Club is now available”
Hello NMDCers! NMDC Photography club ကို 13 ရက်နေ့မှာ စတင်​တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Club activity တွေ အခြားအသစ်အသစ်သော experience တွေ event တွေ Photography workshop တွေနဲ့အခြားအခြားသော [...]
National Education Policy Commission Chairman and committee members visit to NMDC
Dr Myo Kywe, Chairman of National Education Policy Commission visit to National Management Degree College.
Hi NMDC students! Are you graduating soon and looking forafun and exciting career withaglobal company? Come [...]
(Myanmar) စာမေးပွဲတွင်းမှာ CORONA VIRUS ကို အထိရောက်ဆုံး ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ